Home - SK HERBAL
​SK Herbal Premium set
90% effective in treating both recent and long-term acne within7days
SK Herbal Acne Away Set
၀က်ခြံတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ Sensitive Skin ရှိသူတွေအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Set ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာ သုံးစွဲသူ Customer အယောက် ၁၀၀၀ ကို ၈၀% ကတော့ သူတို့အသုံးပြုနေတဲ့ ၁၀ ရက်အတွင်း ၀က်ခြံတွေ လျော့ပါးသက်သာသွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် Sensitive Skin အမျိုးအစားအတွက် မှန်ကန်တဲ့ Product ကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့ SK Herbal Acne Away Set လေးကို ရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပါရစေ။
• ၀က်ခြံကို ၇ ရက်အတွင်း ပျောက်ကင်းသက်သာစေခြင်း၊
• ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ပျက်စီးနေတဲ့ တစ်သျှူးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း
• ချောမွေ့နူးညံ့လာစေခြင်း၊ အသားဖြူဝင်းလာစေခြင်း
• အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ပါးရေတွန့်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းနေစေခြင်း၊ ငယ်ရွယ်နုပျိုစေခြင်း၊ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ လန်းဆန်းစေခြင်း
​Sk herbal Whitening Solution Premium Set
Over 80% confirmed that their skin improved significantly after only 10 days of using this product
Sk herbal Whitening Solution Premium Set လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။
သင့်ရဲ့ အသားအရေအမျိုးအစားနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် အသားအရေကိုလည်း အမှန်တကယ် ဖြူစင်ဝင်းပစေမယ့် Skin Care Product တစ်ခုကို ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ SK Herbal Whitening Sloution Premium Set လေးကို ညွှန်းပါရစေ။
ပုံမှန်အသားအရေနဲ့ ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် ပိုမိုလင်းလက်တောက်ပစေမယ့်၊ ချောမွေ့နူးညံ့စေမယ့်၊ ကျန်းမာစေတဲ့ အသားအရေလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့ ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံက Customer အယောက် ၁၀၀၀ ကို စမ်းသပ်သုံးစွဲစေတဲ့အခါမှာ ၈၀% က သူတို့ရဲ့အသားအရေတွေဟာ ဆယ်ရက်အတွင်း သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာတွေ့ရတယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။
• လင်းလက်တောက်ပစေခြင်း၊ ဖြူစင်ဝင်းပလာစေခြင်း၊ ချောမွေ့နူးညံ့လာစေခြင်း
• ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း
• အသက်အရွယ်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၊ ဇရာရဲ့အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်မှုကို နှေးကွေးစေခြင်း
• မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေနဲ့ အမည်းစက်တွေကို သန့်စင်ကုသပေးနိုင်ခြင်း
• ပျက်စီးနေတဲ့အသားအရေတွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ခြင်း
• ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေပြီး ၀က်ခြံအမာရွတ်များကို သက်သာလျော့ပါးစေခြင်း
• ပိုမိုလှပပြီး ကျန်းမာတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိစေနိုင်ခြင်း
​SPA လုပ်တယ်ဆိုတာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေရဲ့ကောင်းခြင်းငါးဖြာအတွက်ရော စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ ကောင်းကျိုးတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေ ကင်းဝေးပြီး စိတ်နှလုံးသာယာချမ်းမြေ့မှုတွေကို အကောင်းဆုံး SPA လုပ်ပေးခြင်းကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရင်တုန်းကတော့ SPA လုပ်တယ်ဆိုတာ ချမ်းသာတဲ့လူတွေ ဇိမ်ခံတဲ့အရာလို့ပဲ လူသိများကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူအများစုက Beauty Salon တွေ၊ SPA တွေမှာ အချိန်ကုန် ငွေကုန်ခံပြီး သွားမလုပ်နိုင်ကြတာကြောင့်လည်း SPA လုပ်ခြင်းနဲ့ သိပ်ပြီး မထိတွေ့မိကြပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ SK Herbal Easy SPA နဲ့ဆိုရင် နေ့တိုင်း အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ SPA လုပ်လို့ရပြီပေါ့။ နောက်ပြီး တစ်ရက်ကို ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ အချိန်ပေးပြီး လုပ်ရုံနဲ့ ၇ ရက်အတွင်း သိသာထင်ရှားတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိစေမှာ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။
•မည်သည့်အသားအရေအမျိုးအစားနဲ့ မဆိုသင့်လျော်ခြင်း
• လှပသောမျက်နှာ၊အသားရေ နှင့် ဆံပင်တို့ ကိုရရှိစေခြင်း
• အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း
Sensitive Skin Treatment Serum
• ၇ ရက်အတွင်း ၀က်ခြံတွေကို ၉၀% လောက်အထိ လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း
• ၀က်ခြံတွေကို သန့်စင်စေပြီး ၀က်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အသားအရေပြဿနာတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေခြင်း
• အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဓာတ်မတည့်မှုတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
• လင်းလက်တောက်ပစေခြင်း၊ ပေါ့ပါးနူးညံ့စေခြင်း၊ ဖြူစင်ဝင်းပစေခြင်း၊ နူးညံ့ချောမွတ်စေခြင်း
• SPF 30 ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို နေလောင်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
• ၀က်ခြံပေါက်လေ့ရှိတဲ့ Sensitive အသားအရေပိုင်ရှင်များ အသုံးပြုရန် သင့်တော်ခြင်း
• နုပျိုလန်းဆန်းတဲ့အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေခြင်း
Sensitive Skin အတွက် အထူးဖော်မြူလာထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အမည်းစက်တွေ၊ အသားအရေညိုမွဲခြောက်သွေ့မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး သဘာဝအတိုင်း ဖြူစင်ဝင်းပချောမွတ်နူးညံ့တဲ့အသားအရေကို သင်ရရှိပိုင်ဆိုင်စေပါလိမ့်မယ်။ SPF 50 ပါဝင်လို့ နေလောင်ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး အသားအရေပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပြုပြင်ပေးနိုင်သလို အသားအရေကို တင်းရင်းစိုပြည်စေသလို ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မျက်နှာအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ ဗီတာမင်တစ်ခုလိုပါပဲ!
လင်းလက်တောက်ပတဲ့အသားအရေအတွက် မျက်နှာပေါ်မှာ မနက်တစ်ကြိမ် ညနေတစ်ကြိမ် လိမ်းပေးပ
5-In-1 Coconut Magic Makeup Remover ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက
• မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်တွေနဲ့ အသားအရေပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း
• အသားအရေကို လင်းလက်တောက်ပအောင် ကြေးချွတ်ပေးနိုင်ခြင်း
• နူးညံ့ချောမွတ်ပြီး ကျန်းမာတဲ့အသားအရေကို ရရှိစေခြင်း
• အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
• အသားအရေကို ငယ်ရွယ်နုပျိုစေခြင်း
အရည်အသွေးမြင့်သဘာဝကုန်ကြမ်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Cleansing Formula ကြောင့် အသားအရေညိုမွဲပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်တွေကိုပါ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ပိုးသားလေးလို နူးညံ့ချောမွတ်ခြင်းကို ရရှိစေပြီး အဆီပြန်ခြင်း ကင်းဝေးစေပါလိမ့်မယ်။
မျက်နှာပေါ်မှာ လိမ်းပြီး နှစ်မိနစ်လောက် နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဂွမ်းလုံးလေးနဲ့ သန့်စင်ပြီး ရေအေးနဲ့ သေချာစင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောသန့်စင်လိုက်ပါ။
Gluta C Skin Whitening Repair ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက
​• အသားအရေကို လင်းလက်စေခြင်း၊ တောက်ပစေခြင်း၊ ဖြူစင်ဝင်းပစေခြင်း၊ နူးညံ့ချောမွတ်စေခြင်း
• ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း
• အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို နှေးကွေးစေခြင်း
• အသားအရောင်ညိုမွဲခြင်းနဲ့ အမည်းစက်များကို ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်ခြင်း
• ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေပြီး ၀က်ခြံအမာရွတ်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေခြင်း
• အသားအရေကို အသစ်ပြန်ဖြစ်စေပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့အသားအရေကို ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း
Gluta C ဟာ အမည်းစက်တွေကို ပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေကို ပိုမိုကြည်လင်လာစေကာ သဘာဝအတိုင်း ဖြူစင်လှပနေစေပါတယ်။ အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို အပြည့်အ၀ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပြီး သဘာဝအတိုင်း အစိုဓာတ်ကို တစ်နေ့တာလုံး ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ၀က်ခြံတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ပိုမိုတောက်ပစေနိုင်သလို သင့်ရဲ့သဘာဝအလှကိုလည်း ပေါ်လွင်လာစေနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေအာဟာရဖြည့်ပေးနိုင်သလို သဘာဝအတိုင်း အစိုဓာတ်ထိန်းပေးနိုင်တာမို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ညအိပ်ရာမ၀င်ခင် လိမ်းပေးရင် ပိုမိုကျန်းမာပြီး လင်းလက်တောက်ပတဲ့အသားအရေကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
လင်းလက်တောက်ပတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့အတွက် မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညနေခင်း တစ်ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။
Anti-Acne Whitening Soap ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေက
• အသုံးပြုပြီး ၇ ရက်အတွင်း ၀က်ခြံများကို ၉၀% လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း
• ၀က်ခြံများကို သန့်စင်စေပြီး ၀က်ခြံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသားအရေပြဿနာများကိုလည်း ကင်းဝေးစေခြင်း
• ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်းနဲ့ အသားအရေပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
• နူးညံ့ချောမွတ်စေပြီး အသားအရေဖြူဝင်းတောက်ပမှုကို ချက်ချင်းရရှိစေခြင်း
• အရေးအကြောင်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းကာ လန်းဆန်းလတ်ဆတ်စေနိုင်ပါတယ်။
တစ်မျိုးတည်းသုံးရုံနဲ့တင် အသားအရေကို သန့်စင်စေပြီး ၀က်ခြံကင်းဝေးစေကာ နူးညံ့ချောမွတ်ခြင်းကို ချက်ချင်းလိုလို ရရှိစေမှာ သေချာပါတယ်။ အသားအရေကို ပိုမိုဖြူစင်ဝင်းပလာစေပြီး
မျက်နှာကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် (မနက် တစ်ကြိမ်၊ ညနေ တစ်ကြိမ်) သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
sk herbal Facial Mask acial Mask
Whitening Repair Mask ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက
• အသားအရေဖြူစင်ဝင်းပခြင်းနဲ့ နူးညံ့ချောမွတ်ခြင်းတွေကို ၇ ရက်အတွင်း သိသိသာသာ ရရှိလာစေခြင်း
• မျက်နှာပေါ်က အဆိပ်အတောက်များနဲ့ မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း
• ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းနဲ့ ၀က်ခြံအမာရွတ်တွေကို သက်သာလျော့ပါးစေခြင်း
• အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကို အပြည့်အ၀စုပ်ယူပေးနိုင်ပြီး မိတ်ကပ်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်း အချိန်ကြာမြင့်စွာ စွဲမြဲစေခြင်း
• ဆဲလ်အသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကို အလျင်မြန်ဆုံး တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း
သဘာဝသစ်သီးသစ်ဥတွေမှာရှိတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို အားပြည့်အင်ပြည့် စုပ်ယူနိုင်တဲ့ အဆီအနှစ်တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး နည်းပညာသစ်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီ Mask လေးက ဆဲလ်အသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကို သဘာဝအတိုင်းရရှိစေနိုင်ပြီး အာဟာရဓာတ်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ စုပ်ယူပေးနိုင်ပါတယ်။ အစိုဓာတ်ကို တိုးမြင့်စေနိုင်ပြီး အမည်းစက်တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေချောမွတ်လင်းလက်တောက်ပမှုအားကိုလည်း ကောင်းစေပြီး အသားအရောင်ကိုလည်း ညီညာလှပစေနိုင်ပါတယ်။
သေချာညီညာစွာ လိမ်းပြီး 15 မိနစ်၊ မိနစ် 20 လောက်နေရင် ရေအေးနဲ့ သေချာဆေးကြောသန့်စင်လိုက်ပါ။ ပိုမိုလင်းလက်၊ ပိုမိုချောမွတ်တဲ့အသားအရေကို တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်ကနေ သုံးကြိမ် လုပ်ပေးရုံနဲ့ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Collagen Mask အကျိုးကျေးဇူးများ
• အသားအရေကို ဖြူစင်ဝင်းပလာစေပြီး ချောမွတ်နူးညံ့လာခြင်းကို ၇ ရက်အတွင်း သိသိသာသာ ခံစားရခြင်း
• မျက်နှာအသားအရေပေါ်က အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး မျက်နှာအသားအရေညစ်နွမ်းမှုကိုလည်း လျော့ပါးစေခြင်း
• ချွေးပေါက်များကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး ၀က်ခြံအမာရွတ်များဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို သက်သာစေခြင်း
• အသားအရေဖွံ့ဖြိုးလှပမှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း
ဒီ Mask မှာ သံပရိုသီး၊ ရှားစောင်းလက်ပပ်နဲ့ ၀ါးတို့ရဲ့အဆီအနှစ်တွေ ပါဝင်ထည့်သွင်းထားတာမို့ ဆဲလ်တွေကို ပိုမိုအားပြည့်စေပြီး ဆဲလ်တွေ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး မယ်လနင်ဓာတ်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီပါဝင်ပစ္စည်းသုံးမျိုးရဲ့အစွမ်းသတ္တိကြောင့် အသစ်အသစ်သော အရေပြားတွေကို လင်းလက်တောက်ပခြင်းတွေနဲ့အတူ သင့်ဆီကို သယ်ဆောင်လာပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ၀က်ခြံဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဆီကြောင့်ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး ဆားဝက်ခြံတွေ မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Vitamin C Mask ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး •သဘာဝအတိုင်းဖြူစင်ဝင်းပလာစေခြင်း
• မျက်နှာအသားအရေကို အဆိပ်အတောက်ကင်းစင်စေပြီး ညိုမွဲခြောက်သွေ့ခြင်း ကင်းဝေးစေခြင်း
• ချွေးပေါက်တွေကို ကျဉ်းစေနိုင်ပြီး ၀က်ခြံအမာရွတ်တွေကို သက်သာလျော့ပါးစေခြင်း
• အသားအရေရဲ့မယ်လနင်ဓာတ်ကို လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း
အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုသုံးပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အသားအရောင်မညီညာခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ မယ်လနင်ဓာတ်တွေကို လျှော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိသလို အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုလည်း စုပ်ယူပေးနိုင်တာကြောင့် အသားအရေချောမွတ်မှုကို တိုးမြင့်ပေးနိုင်ပြီး ရေဓာတ်လည်း ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရောင်လင်းလက်လာစေပြီး ဖြူစင်ဝင်းလွတ်ခြင်းကိုလည်း သိသိသာသာရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေညိုမည်းညစ်ထေးမှုတွေ၊ အစက်အပြောက်တွေ၊ ၀က်ခြံတင်းတိပ်တွေကို သဘာဝကျကျပဲ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
Baby Face Facial Mask sheet
Sensitive အသားအရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် အဓိကထုတ်လုပ်ထားတဲ့
• ချောမွတ်နူးညံ့ကာ အသားအရေဖြူစင်ဝင်းပလာစေခြင်း
• ၀က်ခြံနဲ့ တခြားအသားအရေပြဿနာတွေကို ကုစားပေးနိုင်ခြင်း
• အဆိပ်အတောက်များ ကင်းဝေးစေပြီး အသားအရေ ညိုမွဲညစ်နွမ်းမှုကို လျော့ပါးလာစေခြင်း
• အောက်ဆီဂျင်စီးဆင်းမှု ကောင်းမွန်စေခြင်း
မျက်နှာကို သေချာသစ်ပါ။ မျက်နှာကပ်ခွာကို ယူပြီး လက်ချောင်းလေးတွေကိုသာ အသုံးပြုပြီး မျက်နှာပေါ် ဖွဖွဖိတင်ပေးပါ။ 15-20 မိနစ်လောက်ထားပါ။ Baby Face Facial Mask ရဲ့ နူးညံ့လှတဲ့အထိအတွေ့က သင့်အသားအရေရဲ့ပင်မဆဲလ်တွေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး တက်ကြွတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အပြည့်အ၀ပေးစွမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 15-20 မိနစ်ပြီးရင်တော့ မျက်နှာကို သေချာပြန်လည်ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
Gluta Facial Mask Sheet
​​good for sensitive skin
​​Gluta Mask Sheet.
Sensitive Skin အတွက်
• လင်းလက်တောက်ပချောမွတ်တဲ့အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ခြင်း
• ၀က်ခြံနဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေကို ကုစားပေးနိုင်ခြင်း
• အဆိပ်အတောက်ပြေစေပြီး အသားအရေညစ်နွမ်းမှုကို လျော့ပါးလာစေခြင်း
• အောက်ဆီဂျင်စီးဆင်းမှုကောင်းစေပြီး အစိုဓာတ်တိုးမြင့်လာစေခြင်း
ဒီ Mask Sheet က မျက်နှာအသားအရေတင်းရင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးထားနိုင်လို့ အရေးအကြောင်းတွေကိုလည်း လျော့ပါးစေနိုင်သလို အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမဖြစ်အောင်လည်း တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ၀က်ခြံနဲ့ တင်းတိပ်တွေကိုလည်း မျက်နှာပေါ်ကနေ ခပ်ဝေးဝေးကို မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်နိုင်လို့ ချောမွတ်နူးညံ့တဲ့အသားအရေကို ပျိုမေတို့ ပိုင်ဆိုင်စေနိုင်မယ်ဆိုတာလည်း အာမခံလိုက်ပါရဲ့နော်။
အမျိုးသားတိုင်းအတွက် All in One Hair Mask
• ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ထိပ်ပြောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
• ဆံပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ခြင်း
• ဆံသားပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
• ဆံသားကျိုးပျက်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခြင်း
• ပိုမိုထူထဲကျန်းမာသော ဆံသားများကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ခြင်း
သကြားဆီ၊ ထောပတ်သီး၊ အုန်းဆီ၊ ရှောက်သံပရာတို့ရဲ့အဆီအနှစ်တွေကြောင့် ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ကြွဝယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတဲ့ Hair Mask လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်သလို ဆံသားဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဦးရေပြာအစိုဓာတ်ကို ပြည့်ဝစေပြီး ဆံသားလေးတွေ နူးညံ့တောက်ပမှုကိုလည်း အပြည့်အ၀ခံစားရမှာကတော့ သေချာပါတယ်။ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆံသားတွေ၊ ကျိုးသွားတဲ့ဆံသားတွေ မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဆံပင်ပေါင်းတင်မှုနဲ့ အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းနိုင်မှုတွေကြောင့် သင့်ဆံပင်လေးက ဘယ်အချိန်ကြည့်လိုက်၊ ကြည့်လိုက် ကျန်းမာပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့ ဆံသားများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆံသားနဲ့ ဦးရေပြားအတွင်းသားထဲထိရောက်အောင် လိမ်းကျံနှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးရင် ခေါင်းဆောင်းလေး ခဏဆောင်းထားပြီး ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ် ၂၀ လောက်နေရင် ရေနဲ့သေသေချာချာလေး ပြန်လည်လျှော်ချပေးလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်မှာ ၂ ကြိမ်ကနေ ၃ ကြိမ်လောက် ပေါင်းတင်ပေးရုံနဲ့ ပြီးပြည့်စုံလှပပြီး ကျန်းမာတဲ့ဆံသားအလှကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
sk herbal whitening Soap
Collagen5plus Soap ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေက
• မျက်နှာပေါ်က အဆိပ်အတောက်များနဲ့ အသားအရေညိုမည်းပျက်စီးခြင်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း
• ကာလရှည်ကြာဖြစ်နေတဲ့ ၀က်ခြံများကို ၇ ရက်အတွင်း ၉၀%အထိ သိသိသာသာ လျော့ပါးသွားစေခြင်း
• အသားအရေပျက်စီးမှုကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ခြင်း၊
• ဖြူစင်နူးညံ့ချောမွတ်တဲ့ အသားအရေကို ၇ ရက်အတွင်း သိသာထင်ရှားစွာ ရရှိစေနိုင်ခြင်း
• ချွေးပေါက်များကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး ၀က်ခြံအမာရွတ်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေခြင်း
မနက်တစ်ခါ ညနေတစ်ခါ မျက်နှာသစ်တိုင်း အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် သဘာဝအတိုင်း လင်းလက် တောက်ပတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့်အပြင် ၀က်ခြံကင်းစင်တဲ့အလှတရားကိုပါ ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။
Gluta White Soap ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
• လင်းလက်တောက်ပဖြူစင်ဝင်းပကာ ချောမွတ်စိုပြည်တဲ့အသားအရေကို ၇ ရက်အတွင်း ရရှိစေခြင်း
• အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ပေးပြီး အရေပြားပျက်စီးမှုကိုလည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေခြင်း
သဘာဝအတိုင်း နူးညံ့စိုပြည်ချောမွတ်တဲ့အသားအရေကို ရရှိစေမယ့် ဆပ်ပြာလေးပါ။ ဗီတာမင် ဘီ၃၊ ဘီ၅၊ ဘီ၉၊ ဗီတာမင် စီနဲ့ Gluthaione တို့ပါဝင်လို့ တောက်ပတဲ့အသားအရေကို ရရှိစေနိုင်ပြီး မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် အောက်ဆီဂျင်စီးဆင်းလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်။ ကျန်းမာပြီး လင်းလက်ညီညာတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ၀က်ခြံနဲ့ အမည်းစက်တွေကင်းစင်ကာ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့အသားအရေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
မနက်တစ်ခါ ညနေတစ်ခါ မျက်နှာသစ်တိုင်း အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် သဘာဝအတိုင်းလင်းလက် တောက်ပတဲ့အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေမယ့်အပြင် ၀က်ခြံကင်းစင်တဲ့အလှတရားကိုပါ ရရှိစေပါလိမ့်မယ်။
Vitamin C Brightening Soap
Vitamin C Brightening Soap ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေက
• အရေပြားပေါ်က အပြစ်အနာအဆာများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း
Vit E ဆပ်ပြာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက
• မျက်နှာပေါ်က အဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို သေချာသန့်စင်ပေးနိုင်ခြင်း
• ကာလကြာရှည်ဖြစ်နေတဲ့ ၀က်ခြံတွေကို ၇ ရက်အတွင်း သိသိသာသာ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားစေခြင်း
• ဆဲလ်သေများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့အသားအရေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ခြင်း
ဒီဆပ်ပြာလေးဟာ Dragon’s Blood လို့ခေါ်တဲ့ အနီရောင်ပန်းတစ်မျိုး၊ ကိုလဂျင်နဲ့ ခရမ်းရောင် Allatonin ပန်းတို့ရဲ့ အဖိုးတန် အဆီအနှစ်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာမို့ အသားအရေတင်းရင်းချောမွတ် စေပြီး ၀က်ခြံကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာအလှကို ပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဗီတာမင်အီးပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွတ်ပြီး အစိုဓာတ်ပြည့်ဝနေစေပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်က အရေးအကြောင်းတွေကို ကင်းစင်စေပြီး ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့အလှတရားတွေကို ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Sexy Body Perfume Lotion ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေက
• SPF 30 ပါဝင်ခြင်း
• ဗီတာမင်အေနဲ့ ဗီတာမင်အီးတို့ရဲ့အစွမ်းကြောင့် အသားအရေကို တင်းရင်စိုပြည်စေခြင်း၊
• ချိုမြိန်လတ်ဆတ်တဲ့ရနံ့လေးနှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း
All-in-One perfumed body lotion မှာ နေလောင်ခံနိုင်ရည် SPF 30 ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှ အပြည့်အ၀ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ချိုမြိန်လတ်ဆတ်တဲ့ရနံ့လေးကြောင့် တစ်နေကုန် လန်းဆန်းနေစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့အသားအရေကို ပိုမိုချောမွတ်၊ နူးညံ့တောက်ပကြည်လင်လန်းဆန်းစေချင်ရင်တော့ ဒီ Sexy Body Perfume Body Lotion လေးနဲ့ မြှင့်တင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ဖော်မြူလာကြောင့် အနားက ဘယ်သူမှ မခွာချင်အောင် ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာ လက်တွေ့နော်။
Body Lotion ခရင်မ်ကို ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ မနက်တစ်ကြိမ် ညနေခင်းတစ်ကြိမ် ရေချိုးပြီးစအချိန်လေးတွေမှာ လိမ်းပေးပါ။
နေ့တိုင်း လိမ်းဖို့တော့ လိုပါတယ်။
Sweet Heart Body Perfume Lotion လေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက
• အသားအရေကို ဖြူစင်ဝင်းပစေပြီး နူးညံ့ချောမွတ်စေခြင်း
• ဗီတာမင်စီနဲ့ ဗီတာမင်အီးပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို သန့်စင်စေပြီး တင်းရင်းစိုပြည်စေခြင်း
• ချစ်စရာကောင်းပြီး ချိုမြိန်လတ်ဆတ်တဲ့ ရနံ့လေးပါဝင်ခြင်း
All-in-One perfumed body lotion ဟာ SPC 30 ပါဝင်တာကြောင့် နေလောင်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး တစ်နေကုန်မွှေးကြိုင်နေစေတဲ့ရနံ့လေးနဲ့အတူ ဗီတာမင်စီနဲ့ ဗီတာမင်အီးရဲ့အစွမ်းသတ္တိကြောင့် တင်းရင်းနေစေမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကို ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ နူးညံ့၊ ချောမွတ်၊ တောက်ပလင်းလက်တဲ့ အသားအရေအလှတရားကို ဒီ Body Lotion လေးနဲ့ ဖန်ဆင်းလိုက်ပါလို့ ညွှန်းလိုက်ချင်ပါရဲ့။
တကယ့်ကိုပဲ အသားအရေရဲ့အလှတရားတွေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကြည်လင်လန်းဆန်းနေစေမယ်ဆိုတာ စိတ်ချလို့ရတယ်နော်။
နေ့တိုင်း လိမ်းဖို့တော့ လိုပါတယ်
​Sk Herbal Product Reviews from Myanmar Celebrities